कहाँ गयो काठमाडौंको घाम? (तस्बिरहरू) :: नवीनबाबु गुरूङ :: Setopati
कहाँ गयो काठमाडौंको घाम? (तस्बिरहरू)
शुक्रबार काठमाडौंको मौसम। तस्बिरः नवीनबाबु गुरुङ/सेतोपाटी
चिसो बढेसँगै काठमाडौंको आकाश धमिलो भएको छ। तुँवालो र धूलोका कारण शुक्रबार काठमाडौंको आकाशमा घाम देखिन सकेको छैन।
सामान्यतया जमिनको सतहबाट उड्ने धूलोधुँवाका कण माथिल्लो तहमा पुगेपछि हावाको बहावसँगै यताउति फैलिनुपर्छ। तर चिसोमा यस्तो हुन पाउँदैन। त्यसैले जाडो याममा धूलोधुवाँका कणले बाक्लो हावा छिचोल्न सक्दैन र फेरि वायुमण्डलतिरै फैलिन्छ। यसले गर्मीमा भन्दा जाडोमा प्रदूषण बढ्छ।
काठमाडौं उपत्यकाको भौगोलिक संरचनाले प्रदूषण जोखिम बढाउँछ।
विज्ञहरूका अनुसार उपत्यका कचौरा आकारको छ। यहाँबाट निस्कने धूलोधुवाँ त्यसै त बाहिर जान गाह्रो छ, जाडोमा त झन् टम्म टालिएझैं हुन्छ। कचौरामा धुवाँ भरेर माथिबाट छोपिदिएपछि के हुन्छ? हो, यहाँको धूलोधुवाँ पनि यसैगरी गुम्सिएर बस्छ।
यी दुई मार्गबाट बिहान साढे ११ बजेपछि मात्र हावा प्रवेश गर्छ।
जबकि, प्रदूषण बढाउने सवारीको प्रवेश बिहानैबाट हुन्छ। दिनभरि गुम्सिएको धूलोधुवाँ काठमाडौंले दैनिक ७५ प्रतिशत मात्र फ्याँक्न सक्छ, २५ प्रतिशत यहीँ बस्छ। यसरी प्रत्येक दिन थुप्रँदै जाने धूलोधुवाँ नै प्रदूषण बढाउने कारण हो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १०, २०७८, ०४:१५:००